Home Wararka Gudaha Muxuu Beyle ka yiri warka sheegaya in dowladdii Farmaajo ay lacag badan...
Muxuu Beyle ka yiri warka sheegaya in dowladdii Farmaajo ay lacag badan ka tagtay
– Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda fedeeraalka Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo muuqaal kooban soo duubay ayaa ka hadlay waxa ka jira wararka sheegaya in dowladdii uu hoggaaminayey madaxweyne Farmaajo ay qasanadda uga tegtay lacago badan, isla-markaana ay buuxaan.
Qasnadaheenaa buuxa anigu ma oran, mana buuxaan. ciddii tiraahdana waa mas’uuliyad darro runtiis sidaas ayaa xaqiiqadu tahay,” ayuu markale yiri wasiir Bayle.
Previous articleSoomaaliya oo si rasmi ah uga qayb gashay Shirka Nabadda, Horumarka iyo Dawladnimada Geeska Africa.
Next articleGustavo Petro oo horey u ahaan jirey Hoggaamiye Jamhad ayaa ku guuleystey doorashadii Colombia